Ifulethi elingu-1 lokuqasha eNingizimu London, eLondon
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » London » Ifulethi elingu-1 lokuqasha eNingizimu London, eLondon1
United Kingdom, London, South London, Kennington, Se1 7gu
2,145 Pound £
Ikhodi Yokuposa: Se1 7gu
Izici: Residents only gym and fitness centre, Incredible views, 24/7 concierge, Interior designed, Private residents swimming pool and spa facilities, Comfort cooling, Underfloor heating, Open plan kitchen and living space, Beautiful wooden floors, Brand New
IGarrison Estates iyakujabulela ukumaketha leli fulethi elihlaba umxhwele lokulala eli-1 elinemibono emfuleni i-River Thames enentuthuko ehlonishwayo yaseSouthbank Place.Yiba ngowokuqala ukuhlala kuleli fulethi elilodwa eliyisimanga entuthukweni entsha sha, i-Eight Casson Square. Isendaweni yeJubilee Gardens, iLondon Eye neThe River Thames lokhu kufanele kube ngenye yezindawo ezifiseleka kakhulu eLondon. Le ndawo inekhishi elihlanganiswe ngokuphelele elinobuchwepheshe besimanje iMiele ne-Siemens okubandakanya imishini yokuwasha izitsha, i-microwave combination oven kanye nefriji lefriji. Igumbi elikhulu lokwamukela elinamafasitela aphansi kuya ophahleni, ikamelo lokulala elinama-bespoke, izingubo zokugqoka eziphakeme ezivumela indawo eningi yokugcina, igumbi lokugezela lomndeni elihlukaniswe ngokuphelele namakhabethe okugcina ephaseji. Ezinye izinzuzo zifaka i-balcony engu-47 sq ft enokubukwa okuhle, isitezi sokhuni kuyo yonke indawo, amawindi acwebezelwe kabili, ukushisa kwangaphansi nokupholisa okunethezeka. Izakhamizi ziphinde zizuze ezinhlotsheni ezinhlobonhlobo zezinkanyezi ezinhlanu, kufaka phakathi indawo yokuhlala yabahlali nezindawo zokuhlangana, nokufinyelela eklabhini yezempilo yangasese kanye neqembu lokuzivocavoca ngejimu, ichibi elingenamkhawulo namakamelo okwelashwa. I-Eight Casson Square inezinsizakalo zayo ezingama-24 zama-concierge service kanye ne-Southbank Place 24 hour security staff. Cishe ama-557 sq ft. EPC: B. Sicela uthathe isikhathi ukubheka i-3D Walkthrough Tour yethu kuthebhu ye-Virtual Tour ngenhla. Sifake izixhumanisi zokungena, indawo yokwamukela izivakashi nendawo yokuphumula / yokudlela yabahlali. Izakhamizi ezizimele kuphela izakhiwo zokuzivocavoca manje sezivulekile futhi zilungele ukujatshulelwa.Eight Casson Square iseningizimu yeSouthbank enkabeni yesifunda samasiko eLondon ne-bfi imax, iSouthbank Center, iRoyal Festival Hall, i-Old Vic Theatre, iTate Modern Art Igalari, iHayward Gallery neNational Theatre konke okuseduze.Southbank Place iyazuza ngokungena esiteji esiteshini samanzi iJubili, iNyakatho, iBakerloo, ulayini weWaterloo City nezitimela eziyinhloko. Ifulethi lisendaweni ekahle eDolobheni, eCanary Wharf naseWest End ngeJubilee Line.
Khetha isigabaAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Townhouses Studios Cottages BungalowsLand lots Residential Land Agricultural LandGarages and parking places Parking garagesCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Cleaning Contractors Design Services Pest Control Furniture CompaniesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents
, Se1 7gu
2,080 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspSouth London in London, Sw4 7qh
2,350 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspSouth London in London, Sw17 8sn
1,798 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspSouth London in London, Sw6 5nh
2,448 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspSouth London in London, Se1 2th
1,777 Pound £ / Njalo ngenyanga
&nbspSouth London in London, Se1 3es
Izikole eziseduzane Se1 7gu